Kudzanai Musengi - VOA Author Bio - Voice of America - page 2
Vaimbove gurukota redunhu reMidlands, VaJason Machaya, vatongerwa kugara mujeri kwemakore mana, asi mwedzi gumi nemisere ichasendekwa parutivi kana vakasapara imwe mhosva mukati memakore maviri
Vamwe vevanhu vari kugara pane imwe yemakamba ari kuchengeta vanhu vakaparadzirwa dzimba nedutumupengo Cyclone Idai kuChimanimani, vanoti vari kurarama hupenyu hwakaoma vachityirawo kubatwa nechirwere cheCovid-19, uye vanoda kuti hurumende ivatsvagire kwekugara kwakanak nekukasika.
Vatori veNhau Voshishikana neZviri Mubhiri Riri Kuda Kuvandudza Mutemo weZMC
Izvi zvabuda mudare redzimhosva muBulawayo pakunzwikwa kwechikumbiro chechimbi-chimbi chakakwidzwa kudare naVaCharles Thomas, chekuti hurumende imise hurongwa hwainaho hwekuda kuviga patsva vanhu vakauraiwa panguva yeGukurahundi.
Vamwe Voshora Zvikuru Mauto Anoshungurudza Vanhu Munyika
Vamwe vanhu vanoti zororo reDefence Forces Day harina zvarinoreva kwavari zvikuru panguva ino apo vamwe vechiuto vari kunzi ndivo vari pamberi panyaya dzekushungurudzwa kweveruzhinji munyika.
VaTawanda Muchehiwa avo vanove muzukuru wemutapi wenhau ari kutsvagwa nemapurisa, Mduduzi Mathuthu, vaunzwa kudare vari muamburenzi vachiperekedzwa nadhokotera wavo sezvo vari kurwara zvekuti havazi kugona kufamba.
Mapurisa neMauto Vorambidza Vanhu Kupinda Mukati Guta reBulawayo
Zimbabwe Lawyers for Human Rights yakwidza nyaya mudare repamusoro richikumbira kuti risendeke parutivi danho rehurumende rekuchinja mazita emigwagwa muBulawayo
Mapurisa nemasoja ange achirambidza vanhu kupinda mumadhorobha uye vanhu vange vapinda mumaguta aya vange vachidzingwa.
Vamwe vanhu vanoti havawoni chinobatsira pakuti nyika idzokere pachinhanho chekuti vanhu vasabuda mudzimba dzavo sezvo zvinodiwa kuri kutevedza mitemo yeWHO.
Vagari Vowaniswa Mvura Yakachena kuPumula South muBulawayo
Vachitaura neStudio7 pakukumikidzwa kwenzvimbo yakadai mumusha wePumula South, mukuru weSchweppes mudunhu reBulawayo, VaNash Mashavave, vati vakaona zvakakodzera kubatsira kanzuru yeguta reBulawayo nekuziva dambudziko rekushaikwa kwemvura rakatarisana nevagari.